निर्यातजन्य उद्योगका लागि विशेष कार्यक्रम आउने, संघीयता व्यवस्थापनको नाममा करको दर नबढाइने अर्थमन्त्रीको भनाई
काठमाण्डौ । सरकारले निकासी प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगका लागि विशेष व्यवस्थासहितको कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । यस्तै, निर्यातमा दिइने सुविधा उत्पादनदेखि निकासी बजारको तहसम्म दिने विशेष व्यवस्था समेत ल्याउन लागिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल उद्योग परिसंघका अधिकारीहरुसँगको भेटमा यस्तो खुलासा गरेका हुन् । उनले निजी...
आउँदो वर्षको प्रथम चौमासमै दोहोरो अंकको वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासमै मुलुकले दुुई अंक(डबल डिजिट)को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्घोष गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वमा गएको उद्योगी व्यवसायीको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटको क्रममा प्रम ओलीले त्यस्तो उद्घोष गरेका हुन् । उनले मुलुकलाई...
नेपाल टेलिकमको होली अफर, ५० रुपैयाँमा डाटा र ३५ रुपैयाँमा अनलिमिटेड कल
काठमाण्डौ । फागुन १७ र १८ गते मनाइने होली पर्वको अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुका लागि ‘होली अफर’ उपलब्ध गराउने भएको छ । कम्पनीका जीएसएम मोबाइलका ग्राहकहरुले सो अफरको उपयोग गर्न सक्ने छन् । सो अफर आगामी फागुन १७ देखि चैत १ गते सम्म खरिद गरी उपभोग गर्न सकिने छ । अनलिमिटेड भ्वाइस नाइट कल कम्पनीले राती १० देखि बिहान ६ बजेसम्म प्रयोग...
नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई चेम्बरको आग्रह
काठमाण्डौ । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै लगानीका लागि दाताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । चेम्बरले पोल्याण्डका राजदूत एडन बुराकोस्कीको स्वागतमा मंगलबार चेम्वर भबन कान्तिपथमा गरेको स्वागत कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई स्थिर सरकार बनेसँंगै...
ओलीलाई चेम्बरको बधाई, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न आग्रह
काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि आर्थिक समृद्धिको आशा सञ्चार भएको भन्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न आग्रह गरेको छ । चेम्बरले शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अबको एजेण्डा आर्थिक समृद्धिलाई बनाउने...
टेलिकमको ट्रेड युनियनमा रावल
काठमाण्डौ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनमा नेपाल दूरसञ्चार कर्मचारी संघ र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल टेलिकमको संयुक्त गठबन्धनले जित हासिल गरेको छ । यही माघ २९ गते एकै समयमा सम्पन्न भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन र कर्मचारी प्रतिनिधि सञ्चालकको निर्वाचनमा संयुक्त गठबन्धनको...
काठमाण्डौ । भारतको प्रमुख अनलाइन मार्केटिङ वेभसाइट म्याड ओभर मार्केटिङ (एम.ओ.एम)ले नेपालको गोर्खा बियरको मिनिमल अनलाइन क्याम्पियनलाई नोटिस गरी गोर्खाको भाइरल क्याम्पियनलाई उनीहरुक सो अनलाइन प्ल्याटफर्म(फेसबुक, इन्ष्टाग्राम पेज र वेभसाइट )मा विशिष्ट स्थान दिएको छ । गोर्खाको नयाँ क्याम्पियनको सिरिजमा गोर्खा बियरले सैनिकको त्यस्तो...
टेलिकमको स्प्रिङ अफर, १३ थरि सेवामा छुटै-छुट
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुका लागि स्प्रिङ अफर ल्याएको छ । यो अफर माघ २५ गते बिहीबारदेखि लागू भई आगामी २०७५ बैशाख २५ गतेसम्म संचालन हुनेछ । १. अल टाइम डाटा प्याक जीएसएम प्रिपेड/पोष्टपेड तथा सीडीएमए प्रिपेड÷पोष्टपेड मोबाइलमा अल टाइम डाटा प्याकेज प्रयोग गर्न सकिन्छ । कम्पनीले पहिले देखि नै उपलब्ध गराएका विभिन्न प्याकेजमा...
एनसेलको भ्यालेन्टाइन अफर: १५ रुपैयाँमा असीमित भ्वाइस प्याक
काठमाण्डौ । एनसेलका ग्राहकले यस भ्यालेन्टाइन सिजनमा आफ्ना प्रियजनसँग असीमित कुराकानीका साथै निरन्तर भिडियो च्याटको मज्जा लिन पाउने भएका छन् । नजिकिदै गरेको प्रणय दिवसको अवसरमा एनसेल प्राईभेट लिमीटेडले आफ्ना ग्राहकका लागि असीमित भ्वाइस प्याक र डेटा प्याक सहितको भ्यालेन्टाइन अफर ल्याएको छ, जसले ग्राहकलाई आफ्ना प्रियजनसँग निरन्तर...
सोमर्सबीको भ्यालेन्टाइन लक्षित अभियान, स्वप्न सुमन र जस्मिन खड्का फेस अफ सोमर्सबी
काठमाण्डौ । गोर्खा ब्रुअरीको सफल उत्पादन सोमर्सबीले भ्यालेन्टाइन डेको पूर्वसन्ध्यामा विशेष अभियान सुरु गरेको छ । सोमर्सबीले प्रेमिल जोडीहरुको भ्यालेन्टाइन डेलाई विशेष बनाउन विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ, जसका लागि फेस अफ सोमर्सबीको रुपमा गायक स्वप्न सुमन र मोडेल जस्मिन खड्का चयन भएका छन् । गोर्खा बु्रअरीले प्रकाशित...